मदनको सालिक ठडाईरहँदा इन्द्रको आँसु पनि पुछ्ने की प्रधानमन्त्री ज्यू?
On: २०७६ फाल्गुन ४ गते, आईतवार, ०३:३९ बजे प्रकाशित
२०४६ सालमा काभ्रेको ढुङखर्कबाट एउटा परिवार भएको जायजेथा बेचेर हिँड्यो। त्यतिबेला आएको जम्मा ५५ हजार रुपैयाँ बाबुकै पालामा लागेको ऋण तिर्दा नै सकियो। जन्मेहुर्केको त्यही प्यारो घर छोडेर हिँडेका थिए इन्द्र प्रसाद घिमिरे दम्पति। श्रीमती च्यापेर हिँडेका ईन्द्रका दिन त्यसपछि त्यति सुखद थिएन। एकपछि अर्को गरि दुखका दिनहरू सुरु भए।
ति सबैको सामना गर्दै इन्द्रले जिन्दगीको रथ जसोतसो घिर्सादै कार्पेन्टरको काम थाले। साथमा श्रीमतीले पनि सहयोग गरिन्। रहँदाबस्दा छोरीको जन्म भयो। २०४६ सालमा घरबाट हिँडेको लगभग १२ वर्षमा इन्द्रले काभ्रेको ‘काभ्रेभञ्ज्याङमा’ २ लाख ८० हजार खर्चेर ७ आना जग्गा किने। यो २०५६ सालतिरको कुरो हो।
अचानक २०७२ सालमा भुकम्प आएपछि भने दुखका दिनको थालनी भयो।’ इन्द्रले सुनाए। त्यतिबेला मैले जग्गा किन्दाको मापदण्ड १५ मिटर थियो, ‘१५ मिटर कटाएर नै मलाई जग्गाधनीले जग्गा पास गरिदिएका थिए, ‘तर अहिले नगरपालिकाले सडकको मापदण्ड २५ मिटर बनाएपछि समस्यामा परे।’ इन्द्रले गला अवरुद्ध पार्दै सुनाए।
स्थानीय उमाकान्त हुमागाईँसँग किनेको त्यही जग्गामा उनै इन्द्रले २०६५ सालमा सानो घर बनाए। ‘बडो दुखका साथ मिहिनेत गरेर कमाएको पैसाले घर बनाएँ, छोराछारीलाई हुर्काए, पढाए, जीवन जसोतसो हाँसीखुसी चल्दै थियो।’ इन्द्रले सुनाए।
हो, यतिखेर इन्द्रको त्यही प्राण भन्दा प्यारो घर भूकम्पले चिराचिरा पारेपछि फेरि बनाउन पाएका छैनन्।
किनकी उनले २०५९ सालमा किनेको त्यही ७ आना जग्गा नयाँ मापदण्डमा २५ मिटर सडकलाई छोड्न पर्ने भएपछि एक आना ३ पैसा मा सीमित भयो। बाँकी रहेको त्यही जग्गामा नयाँ घर बनाउन नगरपालिकाले नक्सा पास नगरेपछि उनको चिन्ता बढेको हो।
भूकम्पले जर्जर बनाएको पुरानै घर टालटुल गरेर बस्दै आएका इन्द्रले भूकम्पपीडितको रुपमा पहिलो किस्ता ५० हजार पनि पाए। तर दोश्रो किस्ता पाउन नक्सा पास हुनपर्ने कारण उनमा बेचैन बढेको छ यतिखेर। जग्गाको नाममा मात्र १ आना तीन पैसा भएका ईन्द्र संग घर बनाएर बस्ने अरु कुनै जमिन छैन्।
तीन सन्तानका बाबु इन्द्रले पहिलो छोरीलाई बिहे गरेर पठाईसके। तर आफूसंग भएका दुईछोराछोरीको चिन्ताले घरिघरि सताँउछ उनलाई साँझविहान।
त्यसो त उनकै घरछेउमै फागुन ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मदन भण्डारीको सालिक बनाईएको त्यही पार्क अनावरण गरिरहँदा इन्द्र टुलुटुलु हेर्न सिवाय केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। किनकी उनीसंग न शक्ति छ न पैसा नै।
त्यसो त उनकै घरछेउमै फागुन ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मदन भण्डारीको सालिक बनाईएको त्यही पार्क अनावरण गरिरहँदा इन्द्र टुलुटुलु हेर्न सिवाय केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। किनकी उनीसंग न शक्ति छ न पैसा नै। नगरपालीकाको दोहोरो मापदण्डको कारण व्यवहारीक सुकुम्वासी बनेका इन्द्रले मदन भण्डारीको सालिक हेरेर नै बाँकी जीवन बिताउन सक्लान्र? दर्जनौ प्रश्न जन्मेको छ यतिखेर।
अन्य सम्बन्धित समाचार: कारागारमा रहेका १४ नेपालीलाई आममाफी दिने कतारको घोषणा
विपि हाईवे, नमोवुद्ध रोड र वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरि धुलिखेल नगरपालिकाद्वारा पार्क निर्माण गरिएकोमा इन्द्रको मात्र हैन स्थानीयकै आक्रोश रहेको छ। उक्त सालिकको विषयलाई लिएर स्थानीय शुक्र दोङ लामाले सामाजिक सञ्जालमा ऐतिहासिक नमोबुद्ध जाने चोकमा बुद्धको मूर्ति राखेर पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नु पर्नेमा जनतासंग सरोकार नै नभएका एक राजनीतिक व्यक्तिको सालिक राख्नु सुहाँउदो विषय नरहेको बताएका छन्। उनले उक्त कार्य बुद्ध धर्मप्रति आस्था राख्नेहरुप्रतिको ठाडो हस्तक्षेप भएको पनि उल्लेख गरेका छन्।
त्यस्तै अर्का स्थानीय विदुर बस्नेतले नमोबुद्ध जाने चोकमा मदन भण्डारीको सालिक नराखि गौतम बुद्धको सालिक राख्दा के होला? भनेर प्रश्न गरेका छन्। उक्त जग्गाको तीनतिरै सार्वजनिक सडक रहेको र उक्त सडकको मापदण्ड २५ मिटर रहेको छ। तर सडक अतिक्रमण गरि पार्क निर्माण बनाईएकोमा मात्र स्थानीयको विरोध नभई उक्त स्थानमा गौतमवुद्धको सालिक राखिनुपर्नेमा अधिंकाशको जोड छ। पार्कको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा फागुन ५ गते सोमबार अनावरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
२०७६ फाल्गुन ४ गते, आईतवार, ०३:३९ बजे प्रकाशित